पोखरा भर्सेज लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः कुन पहिला बनिसक्ला ?
काठमाडौं । पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राराष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत यी दुई विमानस्थलमध्ये कुनको काम पहिला सकिएला ? यस्तो छ दुई अन्र्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यप्रगति:
आयोजना: गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट: १३ अर्ब ६१ करोड
कुल क्षेत्रफल: ७१५ विगहा
निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने मिति: १५ जुन सन् २०१८
म्याद थप पश्चात आयोजना सम्पन्न हुनु पर्ने मिति: २८ जुन सन् २०१९
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रगति
भौतिक प्रगति: ८०.८८ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति: १०० प्रतिशत
हालसम्मको कूल प्रगति
भौतिक प्रगति: ५० प्रतिशत
वित्तिय प्रगति: ६६.६३ प्रतिशत
गौतमबुद्ध विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत पर्ने विमानस्थल हो । लुम्विनीको पर्यटन प्रवद्धनमा यो विमानस्थल महत्पूर्ण हुने अपेक्षा छ । यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंस्थित त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खेप्नु परेको चाप घट्ने छ । गौतमबुद्ध विमानस्थललाई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा हेरिएको छ । स्थानीय बिबाद, मुअब्जा प्रकरण र निर्माण कम्पनीको आन्तरिक किचलोका कारण निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको विमानस्थल यही आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
कुल लागतः २१ अर्ब ४७ करोड
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट: ४ अर्ब ५३ करोड
भैतिक प्रगति: ३३.३४ प्रतिशत
वित्तीय प्रगतिः ३०.०४ प्रतिशत
भैतिक प्रगति: १५ प्रतिशत
वित्तीय प्रगति: ३०.०४ प्रतिशत
आयोजनाको मुख्य समस्या: पहिलो भुक्तानी दिने नीतिगत समस्याका कारण ढिलाई
१. आयोजनाको डिजाईन रिभ्यू र सुपरभिजन कन्सलट्याक्टसँग सम्झौता भई कार्य प्रारम्भ भएको
२. निर्माण दु्रत रुपमा अगाडि बढाइएको
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सन् २०२१ को जुलाईसम्म सक्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने प्रमुख आधारको रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धनको चर्चा चलिरहेको बेला अन्य विमानस्थलको तुलनामा यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपालमा अधिकांश पर्यटक हिमाली क्षेत्रको भ्रमणको लागि आउने गरेका छन । तर, काठमाडौंमा अवतरण गरेर विमान वा गाडीमा पोखरा पुगेपछि मात्र उनीहरुको पर्यटकीय यात्रा सुरु हुन्छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बाह्य पर्यटक सिधै पोखरा ओर्लिन सक्छन् ।
पोखरा र लुम्बिनी